Madaxweyneyaash Soomaaliya iyo Kenya oo isku afgartay hakinta dhismaha darbiga laga dhisayo xadka labada dal | Baydhabo Online
Madaxweyneyaash Soomaaliya iyo Kenya oo isku afgartay hakinta dhismaha darbiga laga dhisayo xadka labada dal
Xaaladda magaalada Balad Xaawo ayaa maanta degan sida ay xaqiijiyeen dad goobjoogayaal ku ah gudaha magaalada oo maalmihii u danbeysay ay ka socdeen kacdoon shacab oo lagaga soo horjeeday darbiga dowladda Kenya ka dhisayso xadka labada dal.
Guddoomiyeha Gobolka Gedo Maxamed Maxamud Maxamed oo la hadlay saxaafadda ayaa sheegay in Madaxweyne Farmaajo uu la xiriiray dhiggiisa dalka Kenya Uhuuro Kenyata, iyagoona si gaar ah u gorfeeyey xaaladda ka taagan magaalada Balad Xaawo.
Guddoomiyaha ayaa xaqiijiyey in labada Madaxweyne ay isku afgarteen shirk heer sare ah oo ku saabsan arrinkan, lana qaban doono maalinimada barri ee talaadada ah, iyadoona Madaxweyne Farmaajo uu arrinkan guddi u xil saaray.
“Waxaan xaqiijineynaa in shirka la isugu imaan doono 27ka bisha, ka horna la joojiyey dhismihii darbiga. Waxaan rajeynaynaa in xal waara aan ka gaarno arrinkan saameynta badan ku yeeshay nolasha bulshada magaalooyinka Balad Xaawo iyo Mandera.” Ayuu yiri Gudoomiyaha Gobolka Gedo.
Guddoomiye Maxamed ayaa ku bogaadiyey bulshada Balad Xaawo sida ay u garab istaageen dadaallada Dowladda Federaalka Soomaaliya ee ku aaddan xal u helista khilaafka ka taagan xadka Soomaaliya iyo Kenya.